JERMALKA OO DALBADAY MUUQAALLADA CADAYNTA NOQONKARA |
JERMALKA OO DALBADAY MUUQAALLADA CADAYNTA NOQONKARA
GERMANY(GNN)Booliiska magaalada Munich ee dalka Jermalka ayaa shacabka ka codsaday in ay la wadaagaan wixii muuqaallo, sawirraan ama codad ah ee ay ka hayaan dhacdadii sagaalka ruux lagu dilay ee jimcihii.
Sagaal ruux ayaa dhacdadaas lagu dilay 16 ruux oo saddex ka mid ah xaaladdoodu xun tahay ayaana lagu lagu dhaawacay.
Qof hubaysan ayaa dadku ku weeraray suuq laga dukaamaysto oo ku yaalla Munich, markii dambe ayuuna isaguna isku dilay meel aan sidaas uga fogayn meesha uu dadka ku laayay sida ay booliisku sheegeen.saami
Ma cadda waxa ku qaaday falkan qofkaas weerarka gaystay oo haysta dhalashooyinka Jermalka iyo Iiraan.
Weerarkaasi waa kii saddexaad ee lagu qaado shacabka ku dhaqan galbeedka Yurub muddo sideed maalmood gudahood ah, midkanna waxaa ka sii horeeyay kii lagu qaaday Nice iyo Wuerzburg.
Booliiska ayaa galinka dambe ee sabtida la wadaagi doona dadka baaritaanadii ay sameeyeen, waxayna shacabka ugu baaqeen in meel khaas ah oo loo diyaariyay ay ku diraan waxkaste oo ay dadku ka duubeen dhacdadaas.
Ciidammada khaaska ah ayaa lagu soo waramayaa in ay baareen guriga ninka dilka gaystay oo ku yaalla degmada Maxvorstadt ee magaalada Munich.